Isku-xidhka Birta ahama & Dareenka Qabashada
Tilmaamaha Rakibaadda ee loo yaqaan 'Flange' ama Flange Adaptor
Adabtarada Flange (adabtarada Flange, flange threaded, flange) waxaa loo isticmaali karaa isku-xirka ku-meel-gaadhka ah ee u dhexeeya tuubbada jeexjeexan iyo qalabka & fureyaasha leh flanges. Dhexroorka, goobta iyo cabbirka daloolka boolida ee ku yaal adabtarada Flange waxay la jaan qaadayaan booliyaasha heerarka caalamiga ah (G ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee Ilkaha Farsamada / Iskutallaabta, Dukaamada Dhinacyada (Nooca duuban iyo nooca xarkaha leh)
Meel dhinac ah (iskutallaab farsamo) ayaa si toos ah loogu isticmaali karaa in lagu xiro tuubooyinka laanta tuubada birta ugu weyn Marka hore, in lagu furo daloolka mashiinka goynta godka tuubooyin bir ah, iskuna xir godka dhinaca (iskutallaabta makaanikada) godka, hareeraha kuwaas oo ay kuxiran yihiin giraanyada goomaha. Meesha laga baxo (makaan ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee isku-xidhka adag & debecsan
Ku rakib gasketka jeebka goomaatada. Cadaadiska ku riix wareega buuxa si aad u hubiso inuu si buuxda ugu fadhiisanayo jeebka goomaatada. HA KU SAMEEYN GAASHKA. 2.Isku dhig boolal guriga ka baxa iyo guryaha hoose, kuna xir lowska si dabacsan balka (lowska waa in lagu raaciyaa ...
Rakiban Grooved Hordhac
Xirmooyinka Grooved Qalabka Hordhaca Waxyaabaha: ASTM A536 GRADE 65-45-12, QT450-10 Mawduucyada: ASME b1.20.1, ISO 7-1, GB7306 Qiyaasta La Heli Karo: 1 ″ - 12 Treatment Daaweynta Dusha: P: Rinjiyeyn E: Electroplated S: Epoxy G: Dhex-dhex-dhexaad ah Galvanized Midabka La Heli Karo: Casaan, Liin, Buluug, Gray, Codsiga Alaabta Cad ...
Faa'iidooyinka EN877 tuubooyin bir ah iyo qalab rakiban
Dahaarka cusub ee gudaha tuubada ee guryaha la hagaajiyey HPS 2000 Ilaalinta ugu wanaagsan ee daxalka ee rakibidda xirmooyinka ay sabab u tahay dahaadhka kataloojiska (gudaha iyo dibaddaba). Nidaamyo isku dheelitiran oo isku dhafan oo tayo sare leh. Cimri dherer sareeya oo ka baxsan shuruudaha lagu qeexay EN877. Hig ...
QAABKA LOOGU TALAGALAY HARGAYSA FANAANADA
Tixraac deg-deg ah, waxyaabaha ugu muhiimsan ee hababka rakibaadda ugu fiican hoos ayaa lagu muujiyey: 1. Hubso inay dusha sare ee dahaadhku nadiif yihiin, qalalan yihiin oo aan lahayn dufan. - Hubi tayada flange iyo goomaha, hubi inaad ka saarto wixii boor iyo wasakh ah. - Safafka tuubooyinka flange. - Ka tag booska betwee ...
TILMAANTA TABABARKA WADAJIRKA TILMAAMKA (2)
6. Hubso in dhamaadka bannaanka la simay; laba jibbaaran ama geesaha afaysan waxay dhaawici karaan ama kala bixin karaan goomaha oo waxay keeni karaan dheecaan. Dhamaadka biibiile ee tuubbada waa in laga nadiifiyaa dhammaan wixii ajnabi ah ee bannaanka ka jooga min min dhamaadka ilaa iyo xariijimaha. Qalabka barafaysan ayaa ku dhegi kara tuubada xilliga qabow waana in laga saaraa ...
TILMAANTA TABABARKA WADAJIRKA TILMAAMKA (1)
Dhammaan arrimaha shisheeye ee ku jira godka waa in laga qaadaa, sida, dhoobada, ciidda, godadka, quruuruxa, quruurux, qashin, alaab barafaysan, iwm. Kursiga goomaha waa in si fiican loo baaraa si loo hubiyo inuu nadiif yahay. Arrinta shisheeye ee ku jirta goomaha goomaha ayaa sababi kara daadis. Ha saliidaynin dawanka gudihiisa. Gaaska ...
Guud ahaan, qalabka birta ee ductile waa naqshado la mid ah kuwa birta cawlan ku xirma dhammaadkooduna waa kala firidhsan yahay ama doorbidayaa, godka. Awoodda farsamo ee weyn ee birta duleelka ayaa suurtogelisay in la hagaajiyo naqshadeynta qalabka iyo in la yareeyo cabbirradooda. Tani waxay sahlaysaa in la jiifo ...
Isku-xidhka iyo barashada isku-xidhka dhuumaha birta ah
Isku-xidhka Isku-xidhka Miisaanka Khafiifka ah ayaa si khaas ah loo farsameeyay si loo dammaanad qaado isku xirnaan adag, dhaqso leh oo fudud oo udhaxeysa dhuumaha iyo fiilooyinka. Ka samaysan bir bir ah oo leh goomayaal caag ah, isku-xidhka ayaa u dhigma tuubbada iyo waxyaalaha aan habboonayn ee guryaha ka samaysan. Tilmaamaha Golaha 1. Ku habboon r ...
Hordhac Dhuumaha Epoxy ee dareeraha birta ayaa laga sameeyay 100% walxaha dib loo cusbooneysiin karo, ma aha oo kaliya jawiga deegaanka, laakiin sidoo kale waxay qancinayaan waxyaabo badan oo lagama maarmaan u ah u adkeysiga xaaladaha gardarrada ah ee gudaha iyo dibaddaba dhuumaha iyo qalabka; guryahaani waxaa ka mid ah heer sare ...
Koolalka xajinta, Isku-xidhka Cadaadiska Sare, Qabashada Rubber
Koolalka Qabashada Nidaamyada tuubbada biyaha roobka ama nidaamyada tuubbada bullaacadaha waxay si shil ah ugu dhici karaan cadaadis ka badan culeyska xad dhaafka ah ama buuxitaanka weyn ee bulaacada. Qaybaha qaaska ah - isbeddelka jihada iyo garaafka, laamaha iyo fiilooyinka-ciriiriga daadashada iyo xasiloonida shaqada tuubada ayaa ugu baaqeysa kala-goysyada ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee Flange ama Fl ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee Farsamada T ...
Tilmaamaha Rakibaadda ee adag & ...
Faa'iidooyinka EN877 tuubooyin bir ah oo la shubay ...